Wiil gabar ku dilay Mölndal oo maxkamad maanta la soo taagay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wiil gabar ku dilay Mölndal oo maxkamad maanta la soo taagay
La daabacay måndag 23 maj 2016 kl 13.14
Goobtii uu dilku ka dhacay. Sawirle: Adam Ihse/TT
Maanta ayaa maxkamad la soo taagay wiil lagu soo eedeeyey inuu ka dambeeyay dilkii gabar ka howl-galeeysay hooygii uu ku noolaa ee dhallaanka keli-nimada dalkan ku yimaada.
Iyadoo sidoo kale lagu eedeeyey isku day dil ee ruux kale oo isku dayay inuu gabadha badbaadiyo.
25-kii bishii jannaayo ayay ahayd kolkii gabadh 22 jir ah oo ka howl-galeeysay hooyga HVB-hem uu qudha ka jaray wiil goobtaa ku noolaa. Sida eedeeynta ku cad waxaa la sheegay in dhowr jeer mindi lala beegsaday gabadha.
Dacwadda lagu soo oogay wiilka ayaa la xiriirta dil iyo isku day dil, iyadoona uu dacwooduhu sheegay in falalkaasi ahaayeen kuwo ku talo gal ah iyo in aanu eedeeysanuhu muujin ka murugeeysnaan iyo falal bareer loo geeystay.
Eedeeysanaha ayaa gacanta lagu dhigay falkaa dabadiis, iyadoona la go’aamiyay in ruumka la dhigo muddo saddex maalmood dabadeed maadaama ay u qornayd inuu 15-jir yahay. Caddeeymaha lagu hayo ayey ka mid yihiin markhaatiyo goobta ku sugnaa, ciidanka ammaanka iyo qalliinkii ey dhakhaatiirtu ku sameeyeen gabadha geeriyootay.
Eedeeysana ayaa sheegtay da’da 15-jir, hase yeeshee baaritaanno lagu sameeyey u janjeeraan inuu ka wayn yahay. Xeer-ilaaliyaha ayaa maxkamadda u soo jeediyay in lagu xukumo eedeeysanaha tarxiil iyo in aanu Sweden dib ugu soo noqon karin.
Löfven oo ka tacsiyeeyey dilkii ka dhacay Mölndal
tisdag 26 januari 2016 kl 16.12